KW7 Ukutshintsha kweMicrosoft
KW7N Tshintsha Micro
KW7F Ubungqina baManzi bokuTshintsha kweMicro
KW12 Ukutshintsha kweMicrosoft
KW12 Bomvu noMnyama
KW12F Ubungqina baManzi bokuTshintsha kweMicro
LZ15 Tshintsha Micro
Ukutshintsha kweMida yokuTywinwa kweMida
I-LZ7 eValiweyo yoMda wokuTshintsha
Ukutshintsha kweMida eMncinci ye-LZ8
I-LHL ehambelana noMda wokuTshintsha
Ukutshintsha kweMida ngokuBanzi ye-LWL
Ukutshintsha kweenyawo kweLF
Iziseko Zamandla ze-IPZ AC
Ukutshintsha kweqhosha le-PBS
Ijiyinti ezincinci ezingamanzi zisetyenziswa ngokubanzi kwindawo emanzi. Idigri yokukhusela ifikelela kwi-IP67. Zisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zasekhaya, koomatshini. Umzi-mveliso wethu unikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zokucoca amanzi okungangeni manzi ngobukhulu obahlukeneyo. Wire Lead ungenziwa ngemfuneko.
I-Electronica Munich yenye yezona ziganeko zikhulu kwihlabathi liphela ze-Elektroniki, iiComputer, iiNkqubo kunye neZicelo. Joyina yonke indawo ye-elektroniki kwindawo enye. Sibonisa utshintsho lwethu oluncinci, umda wokutshintsha, utshintsho lweenyawo kunye nokutshintsha apho. Iimveliso zethu ukutsala ingqalelo vi ezininzi ...
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi esemthethweni
Ukusebenzela abathengi bethu ngcono, iwebhusayithi yethu esemthethweni (www.chinalema.com) ihlaziyiwe. Ulwazi lwemveliso lubanzi ngakumbi. Abasebenzi beenkonzo zabaThengi bakwi-intanethi ngexesha lokwenyani ukubonelela ngesisombululo kubathengi.
Iindidi eziqhelekileyo zokutshintsha ezisetyenziselwa ukuveliswa kwe-elektroniki
ngomphathi ku 20-09-05
Ukuba unomdla wokufumana okungakumbi malunga nemicroswitches, ukwiphepha lasekunene. Kule nqaku, siza kujonga kwiindidi ezahlukeneyo zokutshintsha okuncinci. Oku kuya kukunceda ukhethe iyunithi elungileyo ukuhlangabezana neemfuno zakho zeprojekthi. Eli nqaku liza kukunika ukuqonda okunzulu kwi-6 t ...
Ezona ziNcedo ziPhezulu zokuTshintsha kweMicro kufuneka uyazi kwiMveliso
Ukuqaliswa kotshintsho oluncinci kwihlabathi lezixhobo zombane kunye nezixhobo zombane ibiyinguqulelo. Ukuba ungumvelisi wezixhobo zombane, unokuhlala phambili kukhuphiswano usebenzisa ii-switch ezincinci. Isizathu kukuba izixhobo zibonelela ngezibonelelo ezininzi. Kule nqaku, si ...
Izinto ezisisiseko zokuTshintsha kweMicro kufuneka uyazi ngaphambi kokuveliswa
Usenokuba ubonile ukutshintshwa okuncinci kwiindidi ezahlukeneyo zezixhobo, kodwa ngekhe ulazi igama elipheleleyo lale mveliso. Igama elithi switch encinci libhekisa kutshintsho oluncinci lwentshukumo. Igama linikwe ngenxa yokuba olu hlobo lweswitshi lufuna inani elincinci lamandla ukuze lusebenze. Kweli nqaku, si g ...
Micro Push Iqhosha Micro Tshintsha Akukho Nc Ndawonye, Iqhosha Push Tshintsha Micro, Iqhosha lokutyhala leFootswitch, Guqula ukutshintsha iBoot, Ukutshintsha kombane, Guqula utshintsho,